မြင့်တက်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးဆိုတာဘာလဲ - တရုတ် Ningbo Zhengmao အီလက်ထရောနစ်
တစ်ဦးက တစ်ဟုန်ထိုးဖမ်းဆီး ပြင်ပ (လျှပ်စီး) ကဖြစ်ပေါ်စေ Over-ဗို့အားယာယီသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေး (switching) ဖြစ်ရပ်များထဲကနေလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကာကွယ်ရန်ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကိုခေါ် မြင့်တက်ကာကွယ်မှု device ကို (SPD) သို့မဟုတ် transient voltage surge suppressor (TVSS), this class of device is used to protect equipment in power transmission and distribution systems. (For consumer equipment protection, different products called surge protectors are used.) The energy criterion for various insulation material can be compared by impulse ratio. A surge arrester should havealow impulse ratio, so thatasurge incident on the surge arrester may be bypassed to the ground instead of passing through the apparatus.
တစ်တွဲစပယ်ယာအပေါ်ဖြစ်ပေါ်ယာယီထံမှပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ယူနစ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်, တစ်ဦးမြင့်တက်ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဝင်မယ့်ရှေ့တော်၌ထိုစပယ်ယာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြင့်တက်ဖမ်းဆီးမှုများလည်းချိတ်ဆက် မြေပြင် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု voltages ကိုမှာမြေပြင်ကနေစပယ်ယာသီးခြားစဉ်များထဲမှဖြစ်ပေါ်လျှင်မြေမှ over-ဗို့အားယာယီကနေစွမ်းအင်ကို routing အားဖြင့်၎င်း, functions တွေ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်တစ်ဦး၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် varistor ကွဲပြားခြားနားသော voltages ကိုမှာသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောခုခံတွန်းလှန်ရှိပါတယ်သော။
ဖမ်းဆီးမှုများယေဘုယျအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်ဒီရေလှိုင်း လျှပ်စီးသပိတ် တစ်စပယ်ယာမှ, ဒါပေမယ့်အစားစပယ်ယာ၏အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လျှပ်စီးသပိတ်ထဲကနေရရှိလာတဲ့လျှပ်စစ်ယာယီဆန့်ကျင် [ ကိုးကားလိုအပ် ] ။ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကာကွယ်ကူးသွားနှင့်စပယ်ယာစွန်းဆီသို့အပြင်သို့ပျံ့နှံ့စေတဲ့ယာယီသွေးဆောင်နိုင်သည့်မြေပြင်ရေစီးကြောင်းထဲမှာမြေကြီးတပြင်ရလဒ်များကိုရိုက်ပေးသောလျှပ်စစ်ပြက်။ သော induction ၏တူညီသောမျိုး overhead နှင့်လေထု၏ဖြတ်သန်းစွမ်းအင်တွေ့ကြုံခံစားရသောမြေပြင်ကာကွယ်အထက်တွင်ဖြစ်ပျက် ဝင်းနိုင်ထွန်း ဟာလျှပ်စီးကို flash အားဖြင့်စေ၏။ ဖမ်းဆီးမှုများတစ်ခုသာလျှပ်စီးဥတုရဲ့လျင်မြန်စွာမြင့်တက်-အချိန်ဝိသေသသွေးဆောင်ယာယီဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နှင့်စပယ်ယာဖို့တိုက်ရိုက်သပိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လြှပျစစျမီးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်မည်မဟုတ်ဒီရေလှိုင်း။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောဗို့အားကို system ရဲ့အမှား switching ထံမှအဖြစ်လျှပ်စစ်-သွေးဆောင်အလားတူယာယီ, ကိုလည်းလုံခြုံစိတ်ချစွာမြေပေါ်မှာလှဲစေခြင်းငှါ, သို့သော်အဆက်မပြတ် overcurrents ထိုကိရိယာများအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးကိုင်တွယ်ယာယီအတွက်စွမ်းအင်တစ်ခုလျှပ်စီးဥတု၏ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းလျက်ရှိ၏ သို့သော်သူကပစ္စည်းကိရိယာများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောပမာဏ၏နေဆဲဖြစ်ပြီးမကြာခဏကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လက်လှမ်းကုန်ကျဖြစ်သောအလွန်ထူသောလျှပ်ကာ, မရှိရင်အနည်းဆုံးအကွာအဝေး (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပေ 50 ထက် သာ. ကြီးမြတ်) ထက်ပိုအပြေးအရှိဆုံးကာကွယ်အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းအချို့သောအချိန်ကလျှပ်စီး-သွေးဆောင်ယာယီတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါယာယီပုံမှန်အားဖြင့်စပယ်ယာ၏နှစ်ခုစွန်းတိုင်အောင်အကြားတစ်ချိန်ချိန်အစပျိုးနေသည်သောကြောင့်, အရှိဆုံး applications များပစ္စည်းကိရိယာများအသီးအသီးအပိုင်းအစအတွက်စပယ်ယာမြေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရဖို့ပဲရှေ့တော်၌တစ်ဟုန်ထိုးဖမ်းဆီး install လုပ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ယာယီသွေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်တစ်ခုချင်းစီစပယ်ယာ, ကာကွယ်ပေးရမည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ SPD လုံခြုံစွာသွား protected အစိတ်အပိုင်းကနေယာယီလွှဲမြေကြီးတစ်လမ်းကြောင်းပေးရမညျ။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာ installed ကြသည်မဟုတ်ရှိရာတစျခုကလွဲရင်မြင့်မားသောဗို့အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျခုနှစ်, သွေးဆောင်ဗို့အားလိုင်းများ၏လျှပ်စစ်မျိုးဆက်အဆုံးမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလုပ်ဖို့လုံလောက်မျှမက, သို့သော်အဆောက်အဦးမှဝန်ဆောင်မှုတံခါးနားမှာတပ်ဆင်အဖြစ်ကြံ့ခိုင်မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းထုတ်ကုန်ကာကွယ်ပေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-02-2019